राज्यले सिंगो पत्रकारिताको हत्या गर्ने गम्भिर षडयन्त्र गर्‍यो : अध्यक्ष आचार्य, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
राज्यले सिंगो पत्रकारिताको हत्या गर्ने गम्भिर षडयन्त्र गर्‍यो : अध्यक्ष आचार्य
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले राज्य आफैंले सिंगो पत्रकारिताको हत्या गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको गम्भिर आरोप लगाएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले राज्य आफैं पत्रकारिताको हत्या गर्न लागि परेको गम्भिर आरोप लगाएका हुन्।
बुधबार ललितपुरमा आयोजित ‘डिफेन्डिङ जर्नालिज्म’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले राज्य आफैँले मिडिया चलाउने खुलेआम निर्णय गरेर पत्रकारिताको हत्या गर्ने षडयन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै सचेत रहन पनि पत्रकारहरुलाई आग्रह गरे।
अध्यक्ष आचार्यले पत्रकारिताको आलोचनात्मक चेतलाई नै हत्या गर्ने षडयन्त्रविरुद्ध एकजुट हुन पनि सबै पत्रकारहरुलाई आह्वान गरे। उनले लोकतन्त्रमा संस्थाहरु बलिया नभए मनपरी तन्त्र सुरु हुने अवस्था आउने पनि स्मरण गराए।
कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार प्रतिक प्रधानले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पत्रकारितामाथि अकुंश लगाउने कोशिस गरिरहेको अनुभूति आफूलाई भईरहेको बताएका छन्।
उनले पत्रकारहरुले सामाजिक संजालमा समेत आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेले संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् हुनेगरी कानुन बनाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सचेत हुन पत्रकारहरुलाई आह्वान गरे। उनले सामाजिक सदभावको नाममा पनि पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने प्रावधान आउन सक्ने खतरा रहेको औंल्याए।